jQuery Exit Pop-up Facebook Like Box Widget (Blogger only) ~ Tech in Blogging
10:55 Pyae Phyo2comments
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ အလှဆင်ထားတဲ့ ဒီ box ကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမခက်ပါဘူး။ ဆိုဒ်လေးစ၀င်တာနဲ့ ဒီ fb like box ပေါ်လာတာနဲ့ လူတိုင်းကို Like လုပ်ဖို့ဆွဲဆောင်စေတယ်လေ။
Facebook Like Box ထည့်နည်း
Your Facebook Page URL: မှာ သင့်ရဲ့ fb page url ကိုထည့်ပါ။ ကျွန်တော့်ဟာဆိုရင် ( https://www.facebook.com/techinblogging) . Techinblogging အစား သင့်ရဲ့ fb page လင့်ထည့်ပါ။
Add to Blogger ကိုကလစ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ page တစ်ခုပေါ်လာမည် အဲ့မှာ Add Widget ကိုကလစ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
မရရင် comment ပေးပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး error bugs တွေကို fix လုပ်ပေးမှာပါ။
4 November 2013 at 00:21 Reply
အစ်ကိုယ်ရေ fb page url ကို ဘယ်နေရာမှာ
သွားထဲ့ ရမယ်ဆိုတာ ရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။
2 January 2015 at 03:12 Reply
Malware Warnings ကိုသင့် Blog site ကနေဖျက်မယ် (Blo...
သင့်Blogက ပိုစ့်တွေကို Google+ တွင် Automatic ရောက...
jQuery Exit Pop-up Facebook Like Box Widget (Blogg...
တစ်ချိန်တုန်းက Social networking ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့...
Resume လုပ်မရတဲ့လင့်တွေနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါdownloadယူလို...
Unicode font မြန်မာလို ပြက္ခဒိန်လေးပါ [Blogger only...
Viber 1.041 (Nokia Series 40+Asha+Symbian)
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် [Blogger only]
သင်ယခုရေးနေတဲ့ Blogger site တစ်ခုကနေအပြီးအပိုင်ထွက...
Hack SEO to optimize your blog (Blogger only)
ခေတ်ဆန်ဆန် Social widget စတိုင်လ် [FB|Tweet|RSS|G+...
Author Box ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးထားချင်သူများအတ...
Dreamweaver နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းကိ...
လင့်အရှည်ကြီးတွေကို short url အဖြစ်ပြောင်းကြမယ်